Roller Blind Machira anova ndiyo mafashoni makuru ekudzivirira kwezuva muindasitiri yazvino. Sezvo yayo pamwe nerubatsiro rwekushandisa nyore, elegancy, yakareba nguva yakareba yehupenyu uye zviri nani kukodzera nzvimbo dzakasiyana. Nekuda kwekuwedzera kudikanwa kwekuchengetedza simba uye priva ...Verenga zvimwe »
R + T Nyika Yese Inotungamira Yekutengeserana Fair Kune Vakuru Mashure, Masuo / Masango Uye Zuva Dziviriro Masystem
ETEX ichaenda kuR + T 2021 Stuttgart ine booth yakagadzirirwa kuratidza vatengi vedu dhizaini yekugadzira uye yekugadzira dhizaini yemachira mapofu. Iko kune anodarika mazana maviri emadhizaini akagadzirwa nyowani yakacheneswa mablackout, translucent, jacquard, sunscreen, zvishandiso zvinoshanda. ...Verenga zvimwe »
ETEX inotarisa pamhando yepamusoro mapofu emicheka machira & kugadzira. Kubva kumisikidza, isu tinosimudzira iyo kambani tsika yemhando yekutanga mune zvese zvinoshanda pfungwa uye tinozvichengeta seyedu yekugara. Kuenzanisa yakakwirira zvinodiwa mutengo wekudikanwa kwenyika ...Verenga zvimwe »